Xiaomi's spin-off smartphone brand POCO ichangobva kuwedzera hodhi yayo nekupinda nyowani muIndia kutanga mwedzi uno. Kusiyana neyepfuura poco smartphones yakanangidzira yakachipa mureza uye yepakati-nzvimbo nzvimbo, iyo Poo M2 Pro iri kutarisa chikamu chebhajeti panguva ino kutenderera. Kwete kuti havasati vatokwana vakwikwidzi vanozadza iyo bhajeti nzvimbo, vobva vawedzera kunetsa mutengi, asi POCO inoda kukutengesa iwe iyo yayo yekuona yeyo yakakodzera bhajeti smartphone. Iyo Hardware package ye POCO M2 Pro haisi sepasi rakatyoka sePOTF F1 kana POCO X2 Pro. Semuenzaniso, hapana yakakwirira yekuzorodza chiyero kana kumusoro-kweye-mutsara chipset. Asi tichifunga nezvechikamu chemutengo icho Poo M2 Pro chiri kunanga, iyo hardware pane inopiwa ichiri kukwikwidza. Ndanga ndichishandisa iyo POCO M2 Pro kwemavhiki matatu apfuura, uye heino maitiro andinonzwa nezvefoni.
Ongorora: POCO India yakanditumira yuniti yekuongorora yePOT M2 Pro musi waChikunguru 1st. Ini ndakagamuchira iyo "Mvuri mbiri dzeNhema" muenzaniso mune yayo 6GB / 64GB inogadziriswa. POCO yakange isina kana yekupinza mune zvemukati zvechinyorwa ichi.
POCO M2 Pro XDA Foramu
POCO M2 Pro: Nhamba
DUKU M2 Pro
X X 165.7 76.6 8.8 mamirimita
Gorilla Girazi 5 kumberi & kumashure
Pakati-kurema punch-gomba kuratidza
2x Kryo 465 Goridhe (Cortex-A76-based) cores @ 2.3GHz
6x Kryo 465 sirivheri Cortex-A76-based cores @ 1.8GHz
RAM uye Kuchengetedza
5,000 naRaama matochi
33W kukurumidza charger (mukati mebhokisi)
Kutanga: 48, f / 1.8, 0.8μ
Sekondari: 8MP yakafara-pakona, f / 2.2, 119 °
Chikoro chepamusoro: 5MP Super Macro ine autofocus
Quaternary: 2MP Kudzika kweSensor, f / 2.4
3.5mm musoro wefoni jack
Navigation neIndia Constellation (NavIC)
Rutivi-rwakasimudzwa chigunwe scanner
Android Version Android 10 na MIUI 11 yePOCO
Kubva kunze, iyo POCO M2 Pro yakafanana chaizvo neRedmi Note 9 Pro / Max. POCO yaita shanduko diki kuti isadzokorora kutaridzika chaiko kweiyo yayo. Semuenzaniso, iyo module kamera inosiyana zvishoma, nepo backplate inowanawo basa idzva rekupenda uye mitsetse mitsetse inovhara maviri-matatu ehafu yepasi. Icho chokwadi chekuti POCO M2 Pro dhizaini yakafanana neiyo yeRedmi Note 9 Pro hachisi chinhu chakashata. Kana isu akaongorora iyo Redmi Note 9 Pro pakutanga gore rino, isu takava nezvakawanda zvakanaka zvinhu zvekutaura nezve dhizaini yaro, uye zvakafanana zvinobata zvechokwadi kune yePUKuro M2 Pro. Iyo imwe yemafoni anotaridzika zviri nani mune ino chaiyo mutengo renji. Yedu Shades mbiri dzeBlack variant dzinoyeuchidza nezvekutanga-gen Google Pixel uye nekudaro kusimuka kuzorodza kubva pane zvakajairwa ruvara-kuchinjika gradient kumashure kwatakajairwa kuona muchikamu ichi.
Iyo yepurasitiki yepakati furemu yakavezwa pakati pemapani maviri eGorilla Girazi 5 inochengetedza kumashure uye kumberi. Shure kunopenya uye kwakanyanya kuratidzwa - kanenge segirazi. Iri ibasa kuchengeta zvigunwe zvemunwe uye kurovera pasi. Kumusana kwakadzinirwa zvinyoronyoro pamativi ayo, ayo anobatsira kuti foni iputike zvakanaka muchanza chako. Parutivi rworudyi rwemupendero pakarara chigunwe chakadhinha icho chinopetazve kaviri sebhatani remagetsi. Iyo nzvimbo yeminwe yekutarisa inodzokororwa uye yakamiswa seyakadaro kuti chigunwe chako chaicho chinowira pairi. Padivi remafirati, makiyi ezvigadziriso akaiswa kumusoro zvakanyanya uye nekudaro zvakaoma kusvika pakubata akabata ruoko rumwe ruoko.
Iyo POCO M2 Pro inoratidzira 6.67-inch yakazara HD + LCD pani ine yakakomba hole-punch cutout. Iyo inoratidzira inotsigira kutamba kweHDR10 pamwe neWideline L1 kutsigira kwakazara kwekuridza HD kutamba pamavhidhiyo kusimudzira madhidhiyo akadai seNetflix uye Amazon Prime Vhidhiyo. Kuona HDR yezvinyorwa kunakidzwa pane iyo POCO M2 Pro. Haisi yekutanga mudziyo wekupa HDR pani mune ino mutengo huwandu - iyo Motorola One Fusion + uye iyo POCO X2 inotsigirawo HDR - asi inogaro kugamuchirwa kuva nayo iripo pane imwe bhajeti smartphone.
Kupenya kwakanyanya kwakayerwa 450nits - kwakaringana chiyero cheLCD mune ino mutengo werudzi - uye inopa kutaridzika kwekunze kwekunze. Iyo yakaderera yekupenya kupenya yakagadzikana kubhurawuza usati warara. Seizvo Tushar akacherekedza muRedmi Note 9 Pro wongororo, kutarisa zvemukati pasi pemagetsi akasimba zvinoita sekukonzeresa nzira yakavanzika yezuva, iyo inokwidza kumusoro nekusiyanisa. Kunyangwe izvi zvichiita kuti iratidzike seyakanaka, zvinotora dhizaini pakuburitswa kwemavara uye zvinoita kuti chese chiri pachiso chiratidzike chisiri chisikwa, kunyanya kana uchiona mafoto kana kutamba mitambo. Nehurombo, hapana nzira yekudzima iyi sunlight mode, uye inoita kunge ichipinda zvisinei nekuti ndeupi muvaravara wawasarudza.
MIUI ye POCO
Iyo POCO M2 Pro inomhanyisa MIUI 11 (yePOTCO) yakavakirwa paApple 10. Iyi shanduro yakagadziriswa zvishoma yeMIUI kupfuura yatinowanzowanika pane mafoni eRedmi neMi. MIUI yePUKCO inotsikisa iyo yakajairwa MIUI system Sokuvhurisa yayo poocoCO yekuvhura. Mazhinji ekushandurwa kwekuona anoiswa pakatarisana nekaseti yemuchina skrini. POCO Launcher iri pakati peanoshamwaridzana uye chimiro-chakapfuma masheya anotengesa kunze uko. Pane dhirowa reApp, kusanganisa kweGoogle, kutsigirwa nezvirongedzo zvemasaini, kurongeka kwemaitiro, kugona kuvanza zvirongwa, kupetira-kabiri kukiya skrini, uye zvimwe zvakawanda zvimwe. Izvo zvakakosha kuziva kuti iyo POCO Launcher iri inowanikwa paGoogle Play Store uye saka inogona kuiswa pane chero yemazuva ano smartphone.
Imwe chigadzirwa cheMIUI yePUKO ndeye-isina-software software ruzivo. Iyi inzvimbo imwechete iyo MIUI kwave vanogara vachishoropodzwa nevashandisi vekuratidzira kushambadzira mune ayo ekutanga-mapato maapp, sezvo vazhinji vakanzwa zvichikonzera mune chikamu chidiki che software. Nekufara, pane iyo POCO M2 Pro, hausi kuzoona chero mhando yemashambadziro mune yekuzivisa bar kana muma pre-akaiswa maapp.
Kunze kwemusiyano wakataurwa pamusoro, zvakadaro, iyo yakasara yePUKO M2 Pro's software chiitiko inojairwawo vese. Izvi zvinoreva zvese chiyero MIUI 11 zvinhu zviri pano, kusanganisira akazara-chidzitiro yekufamba-bata zviitwa, matatu-chigunwe skrini, yechipiri Space, Dual mapulogalamu, Game Turbo, system-wide rima mode, nezvimwewo bloatware uye nemapepa ekurumbidza anogarawo, asi mazhinji acho anogona kusunungurwa uye / kana kusarudzika kunze / kudzimwa.
POCO M2 Pro Performance Maitiro
Iyo Poo M2 Pro inotakura iyo Qualcomm Snapdragon 720G octa-core SoC yakabatana ne6GB ye RAM uye 64GB / 128GB yeUFS 2.1 yekuchengetera. Nechemumoyo, maitiro acho haafadze. Kuenzaniswa neyakaitika gore rapfuura Motorola Moto G8 Plus uye Redmi Note 8 ine Qualcomm Snapdragon 665 uye eMMC 5.1 yekuchengetedza combo, iyo POCO M2 Pro inonzwa snappier uye yakawanda inoteerera. Nguva yekugadziriswa kweAppa zvakare zvakare ipfupi, uye mapurogiramu akaita seGoogle Chrome, PUBG Mobile, uye Gmail anotora nguva shoma yekuremeta. Kunze kwekumwe kusimuka kana uchitsvanzvadzira kuburikidza nekupinda maGeneral uye kushandura pakati pemamenyu, iyo yakazara UI performance inonzwa kusheedzera uye kuyerera.
Memory manejimendi yaita sezvaitarisirwa, uye hatina kuona chero kuuraya kusingatarisirwe kwemashure maapp.
Kunyangwe isiri yakanyanya foni yemitambo, iyo POCO M2 Pro inotakura yakasimba punch uye inogona kubata mizhinji yemazuva ano girafu-yakasimba mitambo pane yepakati kusvika pakakwirira mamiriro pasina nyaya. Kudanwa kweDuty Mobile uye PUBG inogadziriswa pamaseti epakati sezvakakurudzirwa marongero. Isu takakwanisa kufona zvinhu kumusoro kwete notch kuHighlands zvemigadziro tisina kuunza chero yakakosha yekupisa mafuta.
POCO M2 Pro Kamera Impressions
Iyo nyaya yePUKCO M2 Pro's performance camera inofamba pamwe neyakajairika maitiro ayo akafanana nebhajeti mafoni. Iyo inopa yakashanda zuva masikati mashandiro asi anotamburira mune yakaderera-mwenje mamiriro. Iyo kamera kamera pachayo haina kuchinjika kubva kuRedmi Note 9 Pro kusanganisira iyo 48MP Samsung ISOCELL GM2 mufananidzo sensor.
Sezvo ichiita seyakajairika pane dzakawanda bhajeti uye yepakati-renhare mafoni, kune iyo 8MP yekupedzisira-yakafara kamera yekukubatsira iwe kupfura maonero akawanda. Yakadzokororwa kuchengetwa yakaenzana neavhareji kana ichienzaniswa neiyo yekutanga kamera, asi iyo yakakura-kona kamera inoita kuti basa riitwe kwenguva yakareba sekunge iwe uri kupfura pasi pemagetsi akakwana.
Iwe unowana zvakare 5MP Macro sensor iyo inokutendera kuti utore zvimwe zvinoshamisa mumaruva, mashizha, macheke, uye yakajeka magirafu. Kubva pamaonero emutengi wepakati, zvisinei, ichi chinhu icho chinonyanya kusiiwa chisingashandiswe kana chinhu chitsva chapera. POCO yakavanza nzira yeMacro yekubhururuka mukati me hamburger menyu, iyo mumaonero edu, inoodza zvakanyanya kushandiswa kwayo. Kuchiisa mune yepamusoro giredhi kana padivi pemamwe macamera modhi mu tray yepasi ingadai yakagadzirisa.
Pfungwa iripo ndeyekuti kuita kwekamera kwakanaka asi kwete kwakanyanya-mukirasi. Pane dzimwe nzira dzekufunga nezvadzo muchimiro chePUKO X2 uye Motorola One Fusion + inopa zvirinani-zvakaderera-mwenje kushanda - zvakadaro pamutengo wakakwira.
Hupenyu hweBhatiri & Kubhadharisa
Iyo POCO M2 Pro inopa hupenyu hwakanakisa hwebheti, uye izvo hazvifanirwe kuuya sekushamisika nemushini wekutakura wakakura zvuru zvishanu mAh bhatiri. Asi pamwe chikamu chinonakidza pamusoro pehupenyu hwebhatiri kusanganisa kweiyo 5,000W inokurumidza charger mubhokisi. Iyo bhatiri rakakura rinowanzouya nechirango chenguva refu yekuchaira - iyo ichinyanya kuitika kune bhajeti zvishandiso uko iwe usingawanzo kuona charger pamusoro pe 33W inosanganisirwa. Tatoona izvi pa Samsung Galaxy M31, iyo inotakura bhegi rakakura kwazvo 6,000 mAh uye inotora kusvika maawa matatu kuti ibhadhare zvakakwana neinosanganisira 3W charger.
Pa PoCO M2 Pro, iwe unowana hwakanakisa hwenyika dzese neye bhatiri hombe inopa hupenyu hwemitambo bhatiri uye iyo 33W inokurumidza charger ichivimbisa kuti unopedza nguva shoma uchisimudza tangi isina. Ichi chishandiso chinotora 1 awa nemaminetsi makumi matatu nemashanu kuenda kubva ku35% kusvika ku0%, izvo zvinorumbidzwa kana uchifunga nezvehukuru hwebheti.
Ini ndanga ndichinyatsogadzirisa mazuva maviri akazara ehupenyu hwebheti nedhi inorema yemagariro ezve media media akadai seTwitter, Instagram, uye Reddit, binge-kutarisa mavhidhiyo paYouTube, achiteerera Spotify nePocket Casts kumashure, uye nekushandiswa kweGoogle. Chrome. Kunyangwe pamazuva apo ini ndaitamba ende zvikamu zveChipo cheDuty Mobile, iyo POCO M2 Pro yakawedzera simba kupinda muzuva raitevera iine 10-15% muto wakasiiwa mutangi. Ivhareji Screen paNguva (SoT) yakavhara maawa kusvika masere kusvika maawa.
Iyo PoCO M2 Pro inoratidza shanduko mune zano rePOTA sezvo mhando inogadzirira kunyudza chigunwe chake muchikamu chebhajeti. Iro zvakare meseji iyo mhando haisi kuzodzimisira pachayo kune vateereri vehu niche uye ichave iri kuwedzera kuvapo kwayo pamativi akasiyana emitengo.
Iyo POCO M2 Pro mubatanidzwa weRedmi Note 9 Pro uye Redmi Note 9 Pro Max. Isu tinoziva kuti mamwe mafoni ePMCO, akadai sePOTO X2 nePOTF F2 Pro, ndeyekudzoserwa shanduro dzeRedmi mafoni. Musiyano wakakosha panguva ino ndewekuti nefoni dzapfuura dzePOTCO, havana kumbobvira vakwikwidzana vachipikisana nevaRedmi vatengesi muIndia. Ivo havana kugara. Izvo zvinosuruvarisa kwete izvo zvakaitika nePUKO M2 Pro, zvisinei, sezvo ichizokwikwidza neicho chinhu icho chiri hwaro hwekuvapo kwayo. Pasina kutaura, izvi zvinokuvadza kuedza kwePOTCO kuchengetedza chinzvimbo chakachengeteka kubva kune hanzvadzi yayo brands uye kusimbisa nzvimbo yayo senge yakazvimirira brand.
Izvo zvakaoma kutaura nezve PoCO M2 Pro usingatauri zvakare neRedmi Note 9 Pro. Iko kusaziva kwekuziva kweSEOCO kwakaonekwa kana uchitaura kune vashoma tech-savvy vanhu. Vanhu vazhinji vakaita sekufungidzira pandakafunga kuti kana vaizotenga Redmi Note 9 Pro zvakadaro, ivo vanofanirwa kufunga nezvokuwana iyo POCO M2 Pro panzvimbo sezvo ichipa kukosha-kwemari. Ini ndaifanirwa kuvadzidzisa nezvehukama hwePOTCO kuXiaomi uye, kunyanya kukosha, kuti iyo POCO M2 Pro yakafanana neRedmi Note 9 Pro munzvimbo zhinji ichive ichipa kukosha kwakanaka pamutengo mumwe chete.
Asi semaonero emutengi angangove mutengi, hapana chimwe chezvinhu zviri pamusoro apa zvine basa rakawanda. Iyo POCO M2 Pro inotarisa zvese zvakakura nezveRedmi Note 9 Pro apo ichipawo yakadarikidza software yekuziva uye kukurumidza kubhadharisa rutsigiro. Mukuita kudaro, inotobvisa iyo Redmi Note 9 Pro kubva pachinzvimbo chayo kubuda semumiririri mutsva wechikamu chebhajeti. Zvinotonyanya kukosha, inowedzera izvi kuvandudza iwe uchichengeta iwo mutengo chaiwo. Izvo zvingave zvisina kunaka kuti utarise iyo PoCO M2 Pro chete sekodhi kabhoni yeRedmi Note 9 Pro. Iyo POCO M2 Pro inonyatso kusiyana mune yayo software software, kamera module dhizaini, uye yekuchaja kumhanya. Asi kunyangwe iwo misiyano yakaringana kuvaka smartphone nyowani kutenderera chimwe chinhu chatisinganyatsogutsikana nezvacho.
Kana ichitariswa mumupu, zvinonetsa kupokana zvinounzwa nePCCO M2 Pro patafura pamutengo wayo wekupa. Kune chero munhu anotsvaga runhare rwakanaka-rwakanaka ne stellar betri mashandiro, makamera anokwanisa, uye inokwanisa software ruzivo rwepasi pegumi nemakumi mairi nemazana mashanu, iyo Poo M15,000 Pro ndeimwe yeakanakisa-ye-mari-smartphones.
Kana iwe usati uchitengeswa zvachose pane kuedza kwePOTCO pane imwe bhajeti ye smartphone, hapana kushomeka kwemamwe maitiro. Iyo Realme 6 ndiye mumhanyi wepedyo uye inopa yakakwirira yekuzorodza chiyero chikero (90Hz), iyo MediaTek Helio G90T SoC, iri nani chirongwa chekamera, uye 4,300 mAh bhatiri ine 30W inokurumidza kubhadharira rutsigiro pamutengo wekutanga ₹ zviuru gumi nezvishanu. Ichangobva kubudiswa Motorola One Fusion + ndeimwe sarudzo huru inopa yakachena yekusoftedza software, yakasimba zvishoma Qualcomm Snapdragon 730G SoC, uye 5,000 mAh bhatiri ine 18W inokurumidza charger. Nekudaro, iyo inongouya mune imwechete yakasarudzika (6GB / 128GB) uye inodhura zvishoma kumusoro kwe at 17,500. Pakupedzisira, iyo POCO X2 inogonawo kutariswa kana iwe uchikarira kufarira-mutambo wefoni uye uine knack yetsika ROMs uye mods.
Tenga POCO M2 Pro: Flipkart (Yakabatana)
The post POCO M2 Pro Ongororo - Yakanatsiridzwa Redmi Cherekedza 9 Pro yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Poco M3 Pro 5G ongororo: Zvakare pamberi penguva yayo
Heano marongero anoita POCO kukunda iyo bhajeti 5G chikamu nePOCO M3 Pro
Filed Under: famba Tagged With: DUKU M2 Pro